शनिबारको दिन पिपलको पूजा गर्दा मिल्ने पाँच चामत्कारिक लाभ - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com शनिबारको दिन पिपलको पूजा गर्दा मिल्ने पाँच चामत्कारिक लाभ - खबर प्रवाह
श्रीगणेशलाई विघ्नहर्ता भनिन्छ, उहाँ शिवको आशीर्वादले सर्वप्रथम पूजनीय हुनुहुन्छ। यदि कुनै पनि प्रकारको धार्मिक कार्यक्रम गणेशको पूजा नगरी सुरु भयो भने त्यसको फल प्राप्त गर्न सकिदैन। भगवान गणेशको पीठको दर्सहन गर्नु शुभ मानिदैन। साथै यो पनि विश्वास गरिन्छ कि उहाँको मूर्ति वा तस्वीर घर भित्र राख्दा पछाडिको भाग घर बाहिर तर्फ पर्ने गरी राख्नुपर्छ, अन्यथा […]
इमानदारीलाई किन मानिसको सबैभन्दा ठूलो शत्रु मान्थे त चाणक्य ? जान्नुहोस् !
चन्द्रगुप्तलाई चक्रवर्ती सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य बनाउने आचार्य चाणक्य एक महान शिक्षक, दार्शनिक र विद्वान थिए। साथै आचार्य चाणक्यलाई नैतिकता र अर्थशास्त्रको जनक पनि भनिन्छ। आज पनि धेरै मानिसहरू आचार्य चाणक्यको नीतिलाई आफ्नो आदर्श ठान्छन्। महानता चाणक्यका अनुसार कुनै व्यक्तिको धर्म, उसको जन्म, उसको पहिचान हुन सक्दैन। एक व्यक्तिको कर्मले नै उसलाई महान बनाउँछ। ऋण ऋण […]
आदर्श दम्पति बन्नको लागि शिव पार्वतीको यी कथा जान्न जरूरी !
विवाहपछि हामी सबै हाम्रो दाम्पत्य जीवन सुखमय र आदर्श रहोस् भन्ने चाहन्छौँ। जब आदर्श विवाहित जीवनको उल्लेख हुन्छ, भगवान राम र माता सीता, भोलेनाथ र माता पार्वतीको उल्लेख हुन्छ। यदि तपाईं पनि आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई खुशी र सुखी बनाउन चाहनुहुन्छ भने भगवान शिव र पार्वती मातालाई अनुसरण गर्नु राम्रो हुन्छ। अपार प्रेम भगवान शिव र […]
राती सुत्दा किन उत्तर दिशामा सुत्नु हुँदैन त ? जान्नुहोस् !
वास्तु शास्त्रका अनुसार गहिरो निद्रामा हामी शक्ति स्रोतहरूसँग जोडिएका हुन्छौँ। यो सम्बन्धले एक शान्त र आफ्नो अस्तित्वको बारेमा उत्साहित बनाउँछ। कति लामो समय सुत्नु हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छैन, महत्त्वपूर्ण भनेको कति गहिरो र अप्रबन्धित निद्रा हो। शान्त र निर्बाध निद्राको लागि वास्तुमा केहि नियमहरू छन्, जसको पालना गरेर प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ र सक्रिय जीवन […]